Wararka - Covid-19 ma ku badbaadi karaa dusha sare ee naxaasta?
Covid-19 ma ku badbaadi karaa dusha sare ee naxaasta?
Copper waa walxaha ugu waxtarka badan ee ka hortagga jeermiska ee dusha sare.
Kumanaan sano, ka hor intaanay ogaanin jeermiska ama fayraska, dadku waxay garanayeen awoodaha jeermiska dila ee naxaasta.
Isticmaalkii ugu horreeyay ee naxaasta ah ee la diiwaan geliyo sida wakiilka caabuqa dilaaga ah wuxuu ka yimid Smith's Papyrus, dukumeentigii ugu da'da weynaa ee caafimaadka ee taariikhda.
Ilaa 1,600 BC, Shiinuhu waxay dawo ahaan u isticmaali jireen qadaadiicda naxaasta si ay u daweeyaan xanuunka wadnaha iyo caloosha iyo sidoo kale cudurrada kaadiheysta.
Oo maarta awooddeedu waarta.Kooxda Keevil waxay hubiyeen biraha hore ee Terminalka Grand Central ee Magaalada New York dhawr sano ka hor."Maxaasta ayaa weli u shaqaynaysa sidii ay ahayd maalintii la geliyay in ka badan 100 sano ka hor," ayuu yidhi."Waxyaabahani waa kuwo raagaya, saamaynta anti-microbial-ka ma tagin."
Sidee dhab ahaan u shaqeysaa?
Qurxinta atomiga gaarka ah ee Copper ayaa siinaysa awood dil oo dheeri ah.Copper waxay leedahay elektaroon bilaash ah qolofkeeda orbital ee elektarooniga ah taas oo si fudud uga qayb qaadanaysa falcelinta dhimista oksaydhka (taas oo sidoo kale ka dhigaysa birta kaari wanaagsan).
Marka microbe-ku uu ku dhaco naxaasta, ions waxay u qarxiyaan pathogen-ka sida weerarka gantaalada, ka hortagga neefsiga unugyada iyo feerka godadka xuubka gacanta ama dahaarka fayruuska iyo abuurista xagjirnimo lacag la'aan ah oo soo dedejiya dilka, gaar ahaan meelaha qalalan.Tan ugu muhiimsan, ion-yadu waxay raadiyaan oo burburiyaan DNA-da iyo RNA gudaha bakteeriyada ama fayraska, iyaga oo ka hortagaya isbeddellada abuura cayayaanka super adkaysta.
COVID-19 ma ku noolaan karaa dusha naxaasta?
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in SARS-CoV-2, oo ah fayras ka mas'uul ah faafitaanka fayraska corona, uusan hadda ku faafin naxaasta 4 saacadood gudahood, halka uu ku noolaan karo dusha balaastig ah 72 saacadood.
Copper waxay leedahay sifooyin antimicrobial ah, taasoo la micno ah inay dili karto noolaha sida bakteeriyada iyo fayraska.Si kastaba ha ahaatee, microorganism-ku waa inuu la yimaadaa naxaasta si loo dilo.Tan waxaa lagu tilmaamaa "dilka xiriirka."
Codsiyada naxaasta antimicrobial:
Mid ka mid ah codsiyada ugu muhiimsan ee naxaasta waa isbitaallada.Dusha jeermiga ugu badan ee qolka isbitaalka - biraha sariirta, badhamada wicida, gacmaha kursiga, miiska saxaaradda, gelinta xogta, iyo tiirka faleebbaha - oo lagu beddelo qaybo naxaas ah.
Marka la barbar dhigo qolalka lagu sameeyay agab dhaqameed, waxaa 83% hoos u dhacay rarka bakteeriyada ee sagxadaha qolalka leh qaybaha naxaasta ah.Intaa waxaa dheer, heerarka caabuqa ee bukaannada ayaa la dhimay 58%.
Qalabka naxaasta ah waxa kale oo uu faa'iido u yeelan karaa sida dusha sare ee jeermiska bakteeriyada ee dugsiyada, warshadaha cuntada, huteelada xafiisyada, makhaayadaha, bangiyada iyo wixii la mid ah.